Writing good CV tips, ကောင်းမွန်သော CV ရေးရန်အချက်အလက်လေးများ ﻿
Writing good CV tips, ကောင်းမွန်သော CV ရေးရန်အချက်အလက်လေးများ
Tags: CV job Myanmar
Your dream job needs the good CV
Before you approach your chosen company you should work on your good CV.
These tips will give you inspiration to help you put together the CV in order to find that ideal job in Myanmar.
Here are simple CV advices to keep in mind.
· Follow the employer's format requirements - .doc, pdf, docx, rtf
· Focus with details on your recent jobs, be less detailed about the past
· Clear and focus description - make sure the reader can understand it
· Write in one font - formatting and easy to read make you noticeable
· Mention the contact details at the end - do not start with it
· Point out specific skills - relevant to the job you're applying to
How you describe your previous professional experience is extremely important! There are few points that should not be forgotten while you mentioning in your previously jobs. They are:
· Company name, brief description and location
· Start and end date (duration)
· Briefly describing the responsibilities
· Achievements - with mentioned benefit
Context is what counts
Everything you mentioned in your CV should be given with context. Focus on details, and put them in suchaway that will attract the person who wants to give youajob.
Don't just mention:
"I think I have excellent skills."
Mentioned something like:
"My skills are demonstrated by … and to be proven by … because …
Do you feel it? Give itacontext.
Keep in mind that the person who is reading your CV has more options and he/she has to get clearly and shortly understanding of who you are, what is your strength and background.
Be sure that you write clearly and pay attention to your grammar is correct and spelling accurate.
Save your resumes in your account also allows you to apply for jobs on the go via our mobile application.
Before you save or send, Check it again!
Before you save, upload or sent the CV, check it again, ask your friend, colleague to read it. Every employer pays attention to details and accuracy.
Great CV will help you to achieve your dream job. CV which is created with no proper attention will hurt your chance to develop your career.
Save your resumes in your account also allows you to apply for jobs on the go via our mobile application
Once you've created your CV you can use it to create your Jobless profile. This is the right spot where you can explore yourself and what is your goals, then let employers and recruiters find you.
သင့်အိမ်မက်ထဲက အလုပ်တစ်ခုရရန်အတွက် CV ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော Company ကိုမလျှောက်မှီသင့် CV ကိုကောင်းအောင်လုပ်သင့်ပါသည်။
အောက်ပါအချက်များသည် သင်လိုချင်သော အလုပ်တစ်ခုကိုလျှောက်ရန်အတွက် CV ကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေရန်အရေးကြီးပါသည်။
CV အတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောအကြံပေးချက်များ။
- အလုပ်ရှင်တောင်းသော File အမျိုးအစားအတိုင်းပေးပို့ပါ။(ဥပမာ doc,pdf, docx, rtf)
- စာဖတ်သူနားလည်နိုင်ရန် ရှင်းလင်းသောအရေးအသားများကိုသုံးပါ။
- Font နှင့် Format များကိုရှင်းလင်းပါစေ။
- ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ အချက်အလက်များကိုအောက်ဆုံးတွင်သာဖော်ပြပါ။
- အလုပ်နှင့်ဆက်နွယ်သော သင့်အရည်အချင်းများကို အထူးပြုရေးသားပါ။
သင်အရင်လုပ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို ရေးသားရာတွင် မေ့မကျန်သင့်သည့် အရေးကြီးသောအချက်များမှာ
- ကုမ္ပဏီနာမည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လိုရင်းတိုရှင်းရေးသားပါ။
- တာဝန်များကို လိုရင်းတိုရှင်းဖော်ပြပါ
သင့် CV တွင် ဖော်ပြသောအချက်အလက်များသည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်ရပေမည်။ ထိုမှသာ သင့် CV သည့် စွဲဆောင်မှုရှိပေမည်။
"ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဟုထင်သည်" ကဲ့သို့သော စကားများမဖော်ပြရ။
"ကျွန်ုပ်အရည်အချင်းများမှာ" ……. ထိုကဲ့သို့ဖော်ပြပါ။
သင့် CV ကိုဖတ်သောသူသည် သင့်ထက်ပို၍ရှင်းလင်း၍နည်းလည်ချင်သည်ကိုသိရှိထားပါ။
Phone Application မှတဆင့်လျှောက်နိုင်ရန်တွက်လည်း သိမ့်ဆည်းပါ။
CV ကိုမသိမ်းခင်၊ မပို့ခင်ပြန်စစ်ဆေးပါ။
သင်မသိမ်းဆည်းခင် သို့မဟုတ် မပို့ခင် ပြန်စစ်ဆေးပါ။ သင့်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားဖတ်ခိုင်းပါ။ အလုပ်ရှင်များသည် သင့် CV အားသေချာဖတ်ရှုမည်ကိုသတိပြုပါ။
CV ကောင်းတစ်ခုသည် သင့်အိမ်မက်ထဲမှအလုပ်အကိုင်ကိုရှာနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။
သင့် CV အားဖန်တီးပြီးပါက သင့် Jobless အကောင့်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Jobless ထဲတွင် သင်၏ရည်မှန်းချက်များအတိုင်း သင်လိုအပ်သည့်အလုပ်ကိုရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။